“Hovalian-tsoa ny Olona Malala-tanana” (Ohabolana 22:9)
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Alur Amharique Amis Anglisy Arabo Armenianina Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bashkir Bassa (Cameroun) Bengali Bicol Boligara Boulou Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chol Cinghalais Cinyanja Dangme Danoà Douala Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Fon Frantsay Ga Garifuna Goujrati Goun Grika Guarani Géorgien Haoussa Hebreo Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Holandey Hongroà Ibanag Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Isoko Italianina Japoney Jula Kabiyè Kannada Kantôney Nentim-paharazana Kikamba Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Kurde Kurmanji Kurde Kurmanji (Caucase) Kurde Kurmanji (Sirilika) Kwangali Kwanyama Letonianina Lingala Litoanianina Luganda Lunda Luo Luvale Malagasy Malayalam Malezianina Mam Mambwe-Lungu Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Marathe Marshall Masedonianina Maya Mazateky (Huautla) Mbunda Mingrelian Mixe (Afovoany) Mongol Mooré Motu Myama Nahuatl (Afovoany) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Puebla Avaratra) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Ngabere Norvezianina Nzema Népali Okpé Oromo Ossète Otetela Ouzbek Pangasinan Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Pidgin (Cameroun) Pidgin Nizerianina Pidgin any Amin'ny Nosy Salomon Poloney Ponape Portogey (Brezila) Quechua (Ancash) Quechua (Bolivia) Romanianina Rosianina Samoanina Sango Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Afrika Atsimo) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sidama Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Swati Tagalog Tailandey Tajiki Tamoul Tatar Tchouvache Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tiv Tlapanèque Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tseky Tshiluba Tsonga Turkmène Tuvalu Twi Tzotzil Télougou Urhobo Venda Vietnamianina Waray-Waray Wolaita Xhosa Yorobà Zandé Zapoteky (Andilan-tany) Zoloa tzeltal Édo Éwé
EFA hatry ny ela ny fanaovana sorona no anisan’ny ampahany lehibe amin’ny fanompoana an’i Jehovah. Nanao sorona biby, ohatra, ny Israelita. Ny Kristianina indray manao “sorona fiderana”, ary efa nampahalaza azy ireo hatry ny ela izany. Misy sorona hafa mampifaly an’Andriamanitra koa anefa. (Heb. 13:15, 16) Mahafaly ny manao an’ireny sorona ireny sady ahazoana valisoa. Diniho ange ireto ohatra ireto e!
Tena te hanana zanakalahy i Hana, mpanompon’i Jehovah tsy nivadika. Tsy nety nanan-janaka anefa izy. Nivoady tamin’i Jehovah àry izy hoe raha miteraka lahy kely izy, dia homeny an’i Jehovah ilay zaza mba hanompo azy “mandritra ny androm-piainany.” (1 Sam. 1:10, 11) Bevohoka izy tatỳ aoriana ary niteraka lahy kely. Nataony hoe Samoela ny anarany. Rehefa nisara-nono ilay zaza, dia notanterahin’i Hana ny voadiny. Nateriny tany amin’ny tranolay masina i Samoela mba hanompo an’i Jehovah. Namaly soa an’i Hana i Jehovah satria nafoiny ho azy ny zanany na dia tena tiany aza. Mbola niteraka dimy izy, ary i Samoela indray lasa mpaminany sy mpanoratra Baiboly.—1 Sam. 2:21.
Afaka manahaka an’i Hana sy Samoela koa ny Kristianina ankehitriny, ka manokana ny fiainany hanompoana ny Mpamorona. Nampanantena i Jesosy hoe hahazo valisoa be dia be isika noho izay rehetra afointsika mba hanompoana an’i Jehovah.—Mar. 10:28-30.
Nanao sorona hanampiana ny hafa i Dorkasy, vehivavy kristianina tamin’ny taonjato voalohany. Nalaza ho mpanao “asa soa” sy ‘niantra ny mahantra’ izy. Narary anefa izy dia maty, ka nalahelo be ny fiangonana. Henon’ny mpianatr’i Jesosy hoe tao amin’ilay tanàna nisy an-dry zareo i Petera, ka niangaviany ho tonga avy hatrany. Faly be ry zareo avy eo satria natsangan’i Petera tamin’ny maty i Dorkasy. Io no fananganana amin’ny maty voalohany resahin’ny Baiboly hoe nataon’ny apostoly. (Asa. 9:36-41) Tsy nanadino ny sorona nataon’i Dorkasy Andriamanitra. (Heb. 6:10) Nosoratana ao amin’ny Baiboly izay nataony, amin’izay isika miezaka ny halala-tanana toa azy.
Modely ho antsika koa ny apostoly Paoly, satria tena tia niahy olona sady nahafoy fotoana hanampiana azy ireo. Hoy izy tamin’ireo Kristianina tany Korinto: “Raha ny amiko, dia ho faly tokoa aho hanome izay rehetra ananako sy hanao sorona tanteraka ny fiainako ho anareo.” (2 Kor. 12:15) Hitan’i Paoly tamin’ny zavatra niainany fa afa-po sady ankasitrahan’i Jehovah ary omeny valisoa ny olona mahafoy tena ho an’ny hafa.—Asa. 20:24, 35.
Faly àry i Jehovah rehefa mahafoy fotoana sy hery isika mba hanaovana ny asan’ilay Fanjakana sy hanampiana ny mpiray finoana amintsika. Afaka manome fanomezana an-tsitrapo koa anefa isika mba hanohanana an’io asa io. Ampiasaina mba hanitarana ny asa fitoriana maneran-tany ireny fanomezana ireny. Tafiditra amin’izany ny fanampiana ny misionera sy ny mpanompo manontolo andro manokana hafa. Ireny fanomezana ireny koa no ahafahana manomana sy mandika boky sy gazety ary video, manampy tra-boina, ary manorina Efitrano Fanjakana. Matokia fa “hovalian-tsoa ny olona malala-tanana.” Manome voninahitra an’i Jehovah koa isika rehefa omentsika azy ny zava-tsarobidy ananantsika.—Ohab. 3:9; 11:25.
Fomba Azo Anaovana Fanomezana Ho An’ny Asa Maneran-tany
Maro ny olona ‘manokana vola’ hatao fanomezana, toy ny tamin’ny andron’ny apostoly Paoly. (1 Kor. 16:2) Arotsak’izy ireo ao amin’ny boatin’ny fiangonana misy soratra hoe “Asa Maneran-tany” izany. Alefan’ny fiangonana any amin’ny biraon’ny sampan’ny Vavolombelon’i Jehovah eo an-toerana ireny vola ireny isam-bolana. Azon’ny tsirairay alefa mivantana koa anefa ny fanomezana an-tsitrapo, ka alefa any amin’ny Biraon’ny Mpitahiry Vola, Fikambanan’ny Mpianatra ny Baiboly eto Madagasikara (FI.MPI.BA.MA.), B.P. 116, 105 Ivato. Ireto avy ny karazana fanomezana azonao alefa mivantana:
FANOMEZANA TSY MISY FEPETRA *
Vola avy ao amin’ny kaonty amin’ny banky, ary alefa amin’ny alalan’ny Internet na amin’ny alalan’ny karatra fandoavam-bola. Azo atao amin’ny alalan’ny jw.org na amin’ny alalan’ny tranonkala hafa efa voafidy koa izany, any amin’ny sampana sasany.
Lelavola, firavaka, na zava-tsarobidy hafa. Asio taratasy milaza hoe fanomezana tsy misy fepetra miaraka amin’ilay izy.
Asio taratasy milaza hoe fanomezana misy fepetra miaraka amin’ilay izy.
Misy fomba tsotra koa azo anaovana fanomezana. Afaka manokana ampahany amin’ny zaridainanao na amin’ny taninao ianao, na mifidy biby vitsivitsy amin’ireo biby ompianao, na mifidy hazo fihinam-boa vitsivitsy eo amin’ny sahanao. Atokano foana izay vokatra azo amin’ilay tany, na biby, na hazo fihinam-boa, ka amidio. Izay vola azo dia arotsahy ao amin’ny boatin’ny fiangonana misy soratra hoe “Asa Maneran-tany.” Mbola misy fomba hafa koa anefa ireto:
Fiantohana sy vola fisotroan-dronono: Azo soratana amin’ny anaran’ny FI.MPI.BA.MA. ny vola avy amin’ny fifanekem-piantohana aina na avy amin’ny fisotroan-dronono.
Kaonty any amin’ny banky: Azo atao ny mifanaraka amin’ny banky hoe ny FI.MPI.BA.MA. no haka ny vola ao amin’ny kaontinao, rehefa maty ianao. Tokony hatao mifanaraka amin’ny fepetra apetraky ny banky izany.
Didim-pananana sy fanankinam-pananana: Azo ampandovaina fananana na vola ny FI.MPI.BA.MA., nefa tokony hisy didim-pananana ara-dalàna hatao mba hampanan-kery an’ilay izy. Misy koa mahazo tombony amin’ny taniny na ny fananany hafa ankininy amin’ny olona na orinasa, ary tiany ny hizara ilay tombony amin’ny FI.MPI.BA.MA. Tokony hosoratany mazava tsara ao amin’ny fifanarahana ifanaovany amin’ilay olona na orinasa izany. Mety hihena ny hetra aloanao, rehefa manasoa fikambanana ara-pivavahana ianao.
Misy fanazavana fanampiny ao amin’ny jw.org/mg, ao amin’ilay hoe “Hanao Fanomezana ho An’ny Asanay Maneran-tany”, eo amin’ny farany ambany amin’ny pejy rehetra. Azonao atao koa ny manoratra na miantso any amin’ny biraon’ny sampana.
^ feh. 11 Antsoina hoe fanomezana tsy misy fepetra ny vola na zavatra omenao, rehefa tsy misy fepetra lazainao momba an’ilay izy.